The chikwata anoshandisa yakarongerwa conical mapatya-sikuruu extruder, DC-nokukurumidza zvuva uye kupinza tembiricha masimba zviridzwa. Rine zvakanakira akasiyana-siyana nokukurumidza murau, zvinonyatsochengeta tembiricha kuzvidzora, nyore uye hwakavimbika oparesheni. The hwebetsero michini achiumbwa nokuda Vacuum chimiro-dzichiumbwa Unit, kudhirowa muchina, achicheka muchina uye zvinhu-okutakurisa. The akashongedzerwa huru kumanikidzwa kutonhora hurongwa grantees ari kuisa migumisiro nhoroondo yomunhu zvinhu. Crawler-mhando mufanidzo muchina adopts rakarurama giya injini uye inventer izvo kunoratidzwa mamiriro akanaka, simba uye akatsiga mufanidzo ability.etc. Nokuveza mumuchina yakaziviswa yakavimbika uye yakarurama kushanda migumisiro. The chinjwa ngoro uye chinokosha unodzivirira rabha rukoko vari vasiyana mashoko-okutakurisa, izvo zvinoita kuti zvemashoko hapana-akapfeka uye nyore kushanda. The auxilary chikwata inotongwa kombiyuta raitungamirirwa programmable hurongwa kana zvimwe zvipfuwo yakakurumbira dzinodzorwa programmable hurongwa kana zvimwe zvipfuwo controllers wakakurumbira, zvinoita kuti kutonga reliablility uye isimbe.
Izvi dzaFord ane zvikuru yakavimbika mukuru goho upenyu hurefu huru magetsi zvikamu zviri kupinza michina zvigadzirwa riri kugadzirwa rine upamhi: 500-1000mm ukobvu: 20-40mm kumeso penyika unhani mushure yakashongedzwa chitarisiko ndiyo yakanaka yokushongedzwa zvinhu
mhando JBD600 JBD800 JBD1000 JBD1250
Max. Rakafara chigadzirwa (mm) 600 800 1000 1250
Extruder womuenzaniso SJZ80 / 156 SJZ80 / 156 SJZ92 / 188 SJZ92 / 188
Max. Extrusion vanokwanisa (makirogiramu / h) 360 360 600 600
Extruder simba (KW) 55 75 110 132
Kutonhora mvura (m³ / h) 12 13 15 18
Compressed mhepo (m³ / Nha) 0.5 0,6 0,8 1
Wood-epurasitiki furo bhodhi iri kunyanya kushandiswa rusvingo puranga, vakatsigira, decking pamapuranga, kavha uye logistics pamwe wemishonga pallets, kuvakwa nematanda, kuchengetwa Racks, uyewo kuita decoration miganhu, inodiwa, kukwira handrails uye zvichingodaro.
Kana uri vachiongorora China PVC huni epurasitiki musuo bhodhi kugadzirwa mutsetse, mutengo, mutengo, kutengeswa, kana PDF, tapota inzwa wakasununguka nesu, tiri mumwe aitungamirira PVC Wood Plastic Door Board Production Line, Door Board Production Line, PVC Door Board Mukudhinda Line vagadziri uye bhizimisi.
Pe mapeji Abs gobvu Board Kuita Machine
Pe mapeji Abs gobvu Board Production Line
PVC Wood Plastic goko Foam Board Production Line
PVC Wood Plastic Door Board Kuita Machine
Nemvumi Board Kuita Machine